Muxuu Andrea Pirlo ka yiri barbardhicii ay xalay kooxdiisa Juventus la gashay Hellas Verona? – Gool FM
(Turino) 28 Feb 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus ee Andrea Pirlo ayaa ka hadlay barbardhacii ay xalay kula galeen naadiga Hellas Verona horyaalka Talyaaniga.
Haddaba Andrea Pirlo ayaa la hadlay warbaahinta kaddib markii ay dhamaatay ciyaarta waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Natiijo niyad jab leh, oo sida aan ka war qabno kulanku wuxuu ahaa mid adag oo dagaal ah, waxaan ku guuleysanay inaan inaan gool ku hormarno, laakiin kuma guuleysan inaan sii ilaashano.”
“Waxaa jira faahfaahino yar, oo aysan fahmi Karin da’ayarta nasiib daro, faahfaahintaan waxay sameyn kartaa Isbadel.”
“Had iyo jeer waa lagama maarmaan in la guuleysto kulamada noocan oo kale ah ee ka dhacaya meel ka baxsan garoonkeena, laakiin waxaan luminay ciyaartoy badan oo khibrad leh, marka dhalinyarada ma aysan fahmin sida ay ciyaarta u socotay.”
“Waxaan ka codsaday Cristiano Ronaldo iyo Alex Sandro inay la hadlaan ciyaartoyda da’da yar si ay u maqlaan codkooda, laakiin taasi kuma filneyn.”